Ngabe umehluko phakathi kweziphepho neziphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukube bekufanele siphawule ngokuthi yiziphi izimo zezulu ezibhubhisa kakhulu nezibuhlungu kakhulu ezikhona emhlabeni, bekungekho ukungabaza ukuthi iziphepho neziphepho.
Imvamisa kuba nokudideka okuncane uma kukhulunywa ngokuhlukanisa, yingakho ngizochaza ngezansi izici ngamunye wabo ukuze kusukela manje wazi ukuthi iyiphi enye futhi iyiphi enye.
1 Umehluko phakathi kwesiphepho nesiphepho
2 Siyini isiphepho?
3 Ngabe isiphepho sakha kanjani?
4 Izici nemiphumela yesiphepho
5 Siyini isiphepho?
6 Sakhiwa kanjani isiphepho?
7 Izici nezimpawu zesiphepho
8 Izigaba Zesiphepho
8.1 Isigaba 1
8.2 Isigaba 2
8.3 Isigaba 3
8.4 Isigaba 4
8.5 Isigaba 5
Umehluko phakathi kwesiphepho nesiphepho
Umehluko wokuqala omkhulu yindawo lapho baqala ukwakhiwa khona. Endabeni yeziphepho, zihlala zakha emhlabeni noma ezindaweni ezisogwini ezisondele kakhulu emhlabeni. Ngokuphambene nalokho, izivunguvungu ziyohlale zakha olwandle futhi akunakwenzeka ukuthi zingadalwa emhlabeni. Omunye umehluko ophawulekayo phakathi kwalezi zenzakalo ezimbili kufanele ubonwe ngejubane lomoya wazo. Ijubane leziphepho liphezulu kakhulu kuneziphepho, futhi umoya ungafinyelela kukho ezimweni ezimbi kakhulu Los km 500 / h. Endabeni yeziphepho, isivinini somoya kuyaqabukela sidlula i250 km / h.
Ngokwesayizi, kukhona futhi umehluko omkhulu ngoba isiphepho esijwayelekile noma esiphakathi ngokuvamile sinobubanzi obucishe bube cishe Amamitha angama-400 0 500. Iziphepho, noma kunjalo, zivame ukuba zikhulu kakhulu ngoba ububanzi bazo bungafinyelela amakhilomitha ayi-1500. Ngokuphathelene nesikhathi sokuphila komunye nomunye kukhona futhi umehluko omkhulu. Iziphepho zivame ukuhlala isikhathi esifushane futhi zingahlala imizuzu embalwa kakhulu. Ngokuphambene nalokho, impilo yesiphepho yinde kakhulu, ihlala kuze kube amasonto ambalwa. Njengesibonelo sakamuva, ngingasho iSiphepho uNadine ebesisebenza hhayi ngaphansi kwezinsuku ezingama-22, kodwa futhi sinakho Isiphepho i-Irma eye yaba namandla amakhulu emlandweni e-Atlantic.
Umehluko wokugcina phakathi kwalaba bobabili ubhekisa enkingeni yokubikezela. Isiphepho sinjalo kunzima kakhulu ukubikezela kunasesimweni sesiphepho, okulula ukubikezela indlela yaso nendawo yokwakheka kwaso.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngeziphepho noma iziphepho, qhubeka ufunde ngoba sisenolwazi oluningi lokukunikeza ngale ndaba.
Isiphepho yisisindo somoya esakha nge-angular velocity ephezulu. Imikhawulo yesiphepho itholakala phakathi ubuso bomhlaba nefu le-cumulonimbus. Kuyisimo somkhathi esiyindilinga esinamandla amakhulu, yize kuvame ukuhlala isikhathi esifushane.
Iziphepho ezakhiwe zingaba nosayizi nobukhulu obuhlukile nesikhathi esivame ukuhlala ngaso phakathi kwamasekhondi ambalwa nangaphezulu kwehora. Isiphepho morphology esaziwa kakhulu yi ifaneli lefaneli, onomphetho omncane uthinta phansi futhi uvame ukuzungezwa yifu elihudula lonke uthuli nemfucumfucu elizungezile.
Ijubane elingafinyelelwa yiziphepho liphakathi 65 no-180 km / h futhi ingaba ngamamitha angama-75 ububanzi. Izinkanyamba azihlali lapho zakhiwe khona, kepha kunalokho zihamba ziwela indawo. Imvamisa zihamba amakhilomitha ambalwa ngaphambi kokunyamalala.
Okuqine kakhulu kungaba nemimoya enejubane elingaguquguquka ngo-450 km / h noma ngaphezulu, linganisa kuze kufike ku-2 km ububanzi futhi uhlale uthinta inhlabathi ngaphezu kwamakhilomitha ayi-100 womzila.
Ngabe isiphepho sakha kanjani?
Iziphepho zizalwa yizulu futhi zivame ukuhambisana nesichotho. Ukuze kwakhiwe isiphepho, izimo ze izinguquko esiqondisweni nasejubaneni lesiphepho, kwakha umphumela ojikelezayo ovundlile. Lapho lo mphumela uvela, isigaxa esime mpo senziwa lapho umoya ukhuphuka futhi ujikeleze ngaphakathi kwesiphepho.
Izimo zesimo sezulu ezikhuthaza ukuvela kweziphepho zivame ukusebenza kakhulu emini kunasebusuku (ikakhulukazi kusihlwa) nasebusuku isikhathi se- entwasahlobo nasekwindla unyaka. Lokhu kusho ukuthi isiphepho kungenzeka ukuthi senzeke entwasahlobo nasekwindla futhi phakathi nosuku, okungukuthi, zivame kakhulu ngalezi zikhathi. Noma kunjalo, iziphepho zingenzeka nganoma yisiphi isikhathi sosuku nanoma yiluphi usuku lonyaka.
Izici nemiphumela yesiphepho
Isiphepho empeleni asibonakali, kuphela lapho sithwala amaconsi amanzi afingqiwe esiphepho somoya esinomswakama nothuli nezinsalela phansi, kuba mpunga.
Iziphepho zihlukaniswa njengeziphepho ezibuthakathaka, ezinamandla noma ezinodlame. Iziphepho ezinobudlova zenza amaphesenti amabili kuphela azo zonke iziphepho, kepha kubangele ukufa kwamaphesenti angama-70 futhi ingahlala ihora noma ngaphezulu. Phakathi komonakalo odalwe yisiphepho esisitholayo:
Abantu, izimoto nezakhiwo zizonke ziphonswe emoyeni
Ukufa okudalwe yi-hit nge-debris ezindizayo
Izazi zezulu azinayo indawo eningi ekubikezeleni iziphepho njengeziphepho. Kodwa-ke, ngokwazi okuguquguqukayo kwesimo sezulu okunquma ukwakheka kwesiphepho, ongoti bangaxwayisa ngobukhona besiphepho kusengaphambili ukusindisa izimpilo. Kulezi zinsuku isikhathi sokuxwayisa ngesiphepho imizuzu engu-13.
Iziphepho nazo zingabonakala ngezimpawu ezithile ezivela esibhakabhakeni njengokujika ngokungazelelwe kube mnyama kakhulu futhi kube nombala oluhlaza okotshani, isichotho esikhulu, nokubhonga okunamandla okunjengokwesitimela.
Iziphepho zihlukaniswa njengeziphepho unamandla futhi unodlame kakhulu emhlabeni. Ukubiza isiphepho kunamagama ahlukene njengeziphepho noma izishingishane, kuya ngokuthi zenzeka kuphi. Igama lesayensi umjikelezo oshisayo.
Iziphepho kuphela ezakha ngaphezu koLwandle i-Atlantic nasempumalanga yePacific Ocean ezibizwa ngokuthi yiziphepho.
Ukuze kube nesiphepho, kufanele kube nenqwaba yomoya ofudumele futhi oswakeme (imvamisa umoya wasezindaweni ezishisayo unalezi zici). Lo moya ofudumele futhi oswakeme usetshenziswa yisiphepho njengophethiloli, yingakho uvame ukwakheka eduze ne-Equator.
Umoya uphuma ebusweni bezilwandle, ushiye indawo ephansi kakhulu inomoya omncane. Lokhu kudala indawo yengcindezi ephansi yasemkhathini eduze nolwandle, ngoba ikhona umoya omncane ngeyunithi yevolumu ngayinye.
Ekusakazeni komhlaba jikelele komhlaba ozungeze iplanethi, izindimbane zomoya zisuka lapho kunomoya omningi ziye lapho kuncane, okungukuthi, zisuka ezindaweni ezinengcindezi ephezulu ziye kwingcindezi ephansi. Lapho umoya ozungeze indawo eshiywe unengcindezi ephansi uhamba ukugcwalisa leso "sikhala", ubuye ushise futhi uvuke. Njengoba umoya ofudumele uqhubeka nokukhuphuka, umoya ozungezile uzungeza ukuze uthathe indawo yawo. Lapho umoya okhuphukayo uphola phansi, ube umswakama wakha amafu. Njengoba lo mjikelezo uqhubeka, lonke ifu nomoya womoya ujikeleza futhi ukhule, kubangelwa ukushisa okuvela olwandle nasemanzini okuhwamuka ngaphezulu.
Izici nezimpawu zesiphepho
Kuya ngesikhala lapho isiphepho sakha khona, sizophenduka ngapha nangapha. Uma ifomu le- umhlaba osenyakatho, isiphepho sizohamba ngokuphikisana newashi. Ngokuphambene nalokho, uma ngabe akhiwa ku- inkabazwe eseningizimu, zizophenduka ngokwewashi.
Lapho umoya uqhubeka uzungeza ngokuqhubekayo, iso (elibizwa ngeso lesiphepho) lakheka enkabeni enokuthula okukhulu. Emehlweni izingcindezi ziphansi kakhulu futhi akukho moya noma imisinga yanoma yiluphi uhlobo.
Iziphepho ziba buthaka lapho zingena emhlabathini, ngoba azikwazi ukuqhubeka zondla futhi zikhule emandleni olwandle. Yize iziphepho zinyamalala njengoba ziwela phansi, ziqine ngokwanele ukudala umonakalo nokufa.
Impela wake wezwa ukuthi "isigaba 5 siphepho." Yiziphi Izigaba Zesiphepho Ngempela? Kuyindlela yokulinganisa ubukhulu namandla abhubhisayo weziphepho. Zihlukaniswe izigaba ezinhlanu futhi zimi kanje:
Umoya ophakathi kwamakhilomitha angu-118 no-153 ngehora
Ukulimala okuncane, ikakhulukazi ezihlahleni, ezimileni, nasemakhaya angomahamba nendlwana noma kuma-trailer angavikelekile kahle.
Ukubhujiswa okuphelele noma okuyingxenye kolayini bamandla noma izimpawu ezifakwe kabi. Ukuvuvukala kwamamitha ayi-1.32 kuye ku-1,65 ngaphezu kokujwayelekile.
Ukulimala okuncane emachwebeni nasezikhungweni.
Umoya ophakathi kwamakhilomitha angu-154 no-177 ngehora
Ukulimala okukhulu kwezihlahla nohlaza. Ukulimala okukhulu kwemizi ehambayo, izimpawu nezintambo zikagesi eziveziwe.
Ukucekelwa phansi kancane kophahla, iminyango namawindi, kodwa umonakalo omncane ezakhiweni nasezakhiweni.
Ukuvuvukala kwamamitha ayi-1.98 kuye ku-2,68 ngaphezu kokujwayelekile.
Imigwaqo nezindlela eduze kwezinto kugcwele amanzi.
Ukulimala okukhulu kwezinsika nezinsika. AmaMarinas anezikhukhula futhi imikhumbi emincane iphula ama-moor ezindaweni ezivulekile.
Ukukhishwa kwabahlali basemathafeni ezindaweni ezisogwini.
Umoya ophakathi kwamakhilomitha angu-178 no-209 ngehora
Umonakalo omkhulu: izihlahla ezinkulu zehlisiwe, kanye nezimpawu nezimpawu ezingafakiwe ngokuqinile.
Ukulimala kophahla lwezakhiwo kanye nezicabha namawindi, kanye nokwakhiwa kwamabhilidi amancane. Kubhidlikile izindlu ezingomahamba nendlwana.
Ukuvuvukala kwamamitha angu-2,97 kuya ku-3,96 ngaphezu kokujwayelekile nezikhukhula ezindaweni eziningi ezingasogwini, ngokucekelwa phansi okukhulu kwezakhiwo eziseduze nogu.
Izakhiwo ezinkulu eziseduze nogu zonakaliswe kakhulu ukuqhamuka kwamagagasi nemfucumfucu entanta.
Izwe eliyisicaba amamitha ayi-1,65 noma ngaphansi ngenhla kogu lolwandle kunezikhukhula ezingaphezu kwamakhilomitha ayi-13 maphakathi nezwe.
Ukukhishwa kwabo bonke abahlali ezindaweni ezisogwini.
Umoya ophakathi kwamakhilomitha angu-210 no-250 ngehora
Umonakalo omkhulu: Izihlahla nezihlahlana zipheshulwa ngumoya, futhi izimpawu nezimpawu ziyasuswa noma zibhujiswe.
Umonakalo omkhulu ophahleni, iminyango namawindi. Ukuwa okuphelele kophahla emakhaya amancane.
Iningi lamakhaya angomahambanendlwana acekeleke phansi noma alimale kabi. - Ukuvuvukala kwamamitha angu-4,29 kuye ku-5,94 ngaphezu kokujwayelekile.
Izwe eliyisicaba elingamamitha angu-3,30 noma ngaphansi ngenhla kogu lolwandle ligcwala amanzi aze afinyelela kumakhilomitha ayishumi phakathi nezwe.
Ukususwa ngobuningi kwazo zonke izakhamuzi endaweni engamamitha angama-500 ukusuka ogwini, futhi nasendaweni ephansi, kuze kufike kumakhilomitha amathathu maphakathi nezwe.
Imimoya engaphezu kwamakhilomitha angama-250 ngehora
Umonakalo oyinhlekelele: izihlahla nezihlahlana kukhukhuleka ngokuphelele futhi kususwe umoya.
Umonakalo omkhulu ophahleni lwezakhiwo. Izikhangiso nezimpawu kuyadatshulwa bese kushaywa umoya.
Ukuwa okuphelele kophahla nezindonga zokuhlala okuncane. Iningi lamakhaya angomahambanendlwana acekeleke phansi noma alimale kabi.
Ivuvukala ngamamitha angu-4,29 kuye kwayi-5,94 ngaphezu kokujwayelekile.
Ngalolu lwazi ungazi kangcono ifayela le- umehluko phakathi kwesiphepho nesiphepho kanye nezici zayo. Ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu, lezi zimo zizoba njalo futhi zibe namandla kakhulu, ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi wazi kahle ngazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uyini umehluko phakathi kweziphepho neziphepho
Incazelo enhle kakhulu; didactic kakhulu
Incazelo elula kakhulu neqondakalayo yabantu abanjengami abebengakwazi umehluko wabo
Ngiyabonga ngolwazi, kufanele ngivume ukuthi bengingazi lutho ngale ndaba.
UJUAN CARLOS ORTIZ kusho
Sawubona ekuseni, angazi ukuthi kukhona yini umuntu oseke wakuphakamisa, kepha ngicabanga ukuthi uma ibhomu liphonswa esweni lesiphepho noma isiphepho esidala isikhala ngokuqhuma, lokhu kuzoqeda amandla emisinga kanye nosongo olumele lokhu .
Phendula ku-JUAN CARLOS ORTIZ
ANTONIO MIRANDA CRESPO kusho
Ekuchazweni ithi iziphepho yiziphepho ezinamandla kakhulu kepha iziphepho zifinyelela cishe ku-500 km / h, kuzofanele ukuthi iziphepho zinamandla kuneziphepho
Phendula u-ANTONIO MIRANDA CRESPO
umsebenzisi weNazi kusho
Incazelo enhle, ekuqaleni ufaka igama elithi ´´te .piuedo. caphuna i-
isiphepho´´ njll bengikutshela ukuthi kungani ubeke i-piuedo.
Kepha incazelo enhle kakhulu. Qhubeka nomsebenzi omuhle
Phendula umsebenzisi weNazi
Ukufudumala kwembulunga yonke komisa uLwandle iCaspian